[OFISIALY] dr.fone - Fifantenana iOS Data Backup & Ampodio
dr.fone Toolkit - iOS Data Backup & Ampodio
Backup & Avereno iOS Data Nanova malefaka
Click To iray manontolo nomaniny ho solon'izay ny iOS fitaovana ao amin'ny solosaina.
Avelao ny mijery mialoha sy hamerina amin'ny laoniny izay zavatra avy amin'ny nomaniny ho solon'izay ny fitaovana.
Pirenena izay tianao amin'ny nomaniny ho solon'izay ao amin'ny solosaina.
Tsy misy tahirin-kevitra intsony ny fitaovana mandritra ny hamerina.
dr.fone Toolkit - iOS Data Backup & Ampodio mamela anao fantenana nomaniny ho solon'izay, ary hamerina amin'ny laoniny izay tianao amin'ny iOS fitaovana / nomaniny ho solon'izay.
dr.fone Toolkit - iOS Data Backup & Ampodio mamela anao hanao iray rehetra nomaniny ho solon'izay ny ankamaroan'ny tahirin-kevitra eo amin'ny iPhone sy ny iPad, na afaka hanondrana fifantenana ny tahirin-kevitra izay te-foana eo amin'ny solosaina. Raha misy mila, ianao ihany koa dia afaka hamerina ny tahirin-kevitra maintsy hiatrika ny fitaovana amin'ny alalan'ny fisafidianana ny zavatra tianao. Ho tsara kokoa noho ny mampiasa iTunes safidy na iCloud.
Backup Ny iPhone / iPad iray Click
Ny zavatra nomaniny ho solon'izay manontolo anareo zavatra iray ihany no mitondra tsindry. Rehefa ny fitaovana no mifandray sy hita, ny fandaharana dia tonga dia nomaniny ho solon'izay tahirin-kevitra eo amin'ny iPhone, iPad na iPod mikasika. Ny vaovao rakitra nomaniny ho solon'izay tsy overwrite ny taloha indray. Afaka manao nomaniny ho solon'izay isaky tianao.
Miverina rehetra karazana antontan-taratasy
Hahafantatra bebe kokoa >>
iPhone Backup ary hamerina Nanova Easy
Nomaniny ho solon'izay, ary hamerina amin'ny laoniny iPhone angona iray tsindry rehefa mampifandray ny fitaovana.
iPhone Backup Files no tsy havaozina
Afaka manao ny nomaniny ho solon'izay iPhone isan'andro sy ny antontan-taratasy rehetra nomaniny ho solon'izay dia voavonjy ka tsy Hisolo ny vaovao.
Azonao atao ny mijery mialoha ny tsipiriany rehetra ny iPhone nomaniny ho solon'izay raki-daza izany nomaniny ho solon'izay, ary hamerina amin'ny laoniny iOS fandaharana, ka afaka mitantana tsara ny iPhone nomaniny ho solon'izay.
iPhone Avereno Tsy Overwrite ny Data
Rehefa vita ny topi-maso, dia afaka misafidy izay zavatra ao amin'ny iPhone ny nomaniny ho solon'izay izay ampy handoavana izany ny iPhone na iPad. Dia tsy hisolo misy tahirin-kevitra misy eo amin'ny fitaovana.
Pirenena ny iPhone Data
Raha te-hamaky na pirinty ny tahirin-kevitra, ianao ihany koa dia afaka hanondrana entana ao amin'ny iPhone nomaniny ho solon'izay toy ny HTML rakitra, na ny hafa izay tianao. Miankina aminao.
Tsy maninona ianao mampiasa ny farany iPhone 7 Plus, iPad Pro, na ny taloha 4 iPhone, iPad 1, io antontan-kevitra iOS fanarenana tanteraka rehetra mifanaraka amin'ny ohatra ny iPhone, iPad sy iPod mikasika.
Izany iOS nomaniny ho solon'izay, ary hamerina amin'ny laoniny tanteraka ny fandaharam-potoana dia namaky-rindrankajy ihany. Ary tsy mitandrina, manova na mandefa tahirin-kevitra misy eo amin'ny fitaovana na eo amin'ny nomaniny ho solon'izay rakitra. Mitondra manokana ny tahirin-kevitra sy kaonty zava-dehibe. Ianao foana no hany olona afaka mahazo azy io.
Ary ny amin'ny nomaniny ho solon'izay antontan-taratasy, dia afaka misafidy ny hitandrina azy ireo, na mamafa izay rehetra avy tamin'ny olona izay tsy manana ny mila fanampiana. Ankoatra izany, dia afaka maneho sy hanondrana misy zavatra avy amin'ny nomaniny ho solon'izay rakitra eo amin'ny solosaina, ka mamonjy azy tahaka ny HTML, CSV na Moscow raki-daza.
Backup ka hampody tahirin-kevitra eo amin'ny iOS fitaovana mora foana.
iOS Data Backup & Ampodio asa ho an'ny iOS rehetra Fitaovana
Export rakitra format
Export fifandraisana sy ny hafatra ho ny solosaina toy ny .csv, .html, na Moscow;
Export WhatsApp hafatra ho solosaina toy ny .csv na .html;
Export antso vatan-kazo, fanamarihana, kalandrie, fampahatsiahivana sy Safari ny tsoratadidy ny solosaina toy ny .html.
3 Fomba Backup Notes amin'ny iPhone sy ny iPad
Inona no iTunes Backup?
Ahoana no mba hamerenana ny WhatsApp Backup amin'ny iPhone sy ny fitaovana Android
Fomba roa Backup iCloud Contacts
Ahoana no mba Backup Data amin'ny Locked iPhone 7 (Plus) / SE / 6s (Plus) / 6
Ahoana no mba hamerina amin'ny iTunes Backup
iPhone Backup Extractor: hanesorana ary sitrana iPhone Data
4 Fomba ny Backup Contacts amin'ny iPhone / tsy misy iTunes
Ahoana no Hahitana iPhone Backup Location sy Fafao Backups
Sitrana very na voafafa fifandraisana, hafatra, sary, fanamarihana, sns avy amin'ny iPhone, iPad sy iPod mikasika.